April 11, 2021 - Achawlaymyar
မိန်းကလေးတွေ ဝေးဝေး ရှောင်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျားညံ့ ( ၆ ) မျိုး
April 11, 2021 by Achawlaymyar
မိန်းကလေးတွေ ဝေးဝေး ရှောင်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျားညံ့ ( ၆ ) မျိုး ဘယ်လောက်တောင်ပဲ လန်းနေနေ၊ မိုက်နေနေ လုံးဝ မပတ်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အနားမှာ ဒီလို လူမျိုးတွေက မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအဖြစ် ရှိနေရင် မိတ်ဆွေ ဆက်ဆံရေး အတိုင်းပဲ ထားပါ။ လုံးဝကို ကိုယ့်ဘဝထဲ၊ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲ အဝင်မခံပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အနေနီးပြီး စိတ်ယိမ်းယိုင် တာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ရှောင်ပါ။ သင် လုံးဝ ရှောင်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျား အမျိုးအစားတွေကတော့… ( ၁ ) ချစ်သူရှိနေပီးသူ ဘယ်လောက်ပဲ လန်းနေနေ၊ တော်နေနေ လုံးဝ ရှောင်သင့်တဲ့ ယောက်ျား အမျိုးအစားထဲမှာ ဒီလို လူမျိုး ပါပါတယ်။ … Read more
သင့်အနာဂတ်ကို ပံ့ပိုးကူညီနေမယ့် ချစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့လက္ခဏာများ
သင့်အနာဂတ်ကို ပံ့ပိုးကူညီနေမယ့် ချစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့လက္ခဏာများ အချို့ချစ်သူတွေဟာ ကိုယ်ရဲ့အတ္တကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ချစ်သူရဲ့ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေကို ပုံဖော်ခွင့်မပေးတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ချစ်သူမိန်းကလေးကျတော့လည်း ချစ်သူအပေါ်မှာ နားလည်မှုတွေ ရှိပြီး အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေ အကောင်အထည်အဖော်ရမှာလည်း အားပေးအားမြှောက် ပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ် …။ ယခုအခါမှာတော့ ချစ်တို့အတွက် အနာဂတ်ကို ပံ့ပိုးကူညီပေးမယ့် ချစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) အနှောက်အယှက်မပေးဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် သင်ဟာ စာရေးတာ ဝါသနာပါသူတစ်ယောက် ဆိုပါတော့ …။ သင်စာရေးနေရင် အခြား ဆူညံသံပြုနေတယ်ဆိုရင်တောင် အလိုက်တသိ ရပ်ပေးလိုက်တယ်။ သင် စိတ်အာရုံစုစည်းမှုကို ပျက်ပြားစေမယ့် အရာတွေကို မလုပ်ဘူး …။ သီချင်းဆိုတာ ဝါသနာပါတယ် ဆိုရင်လည်း သင် ဂစ်တာတီးလုံး စမ်းနေချိန်၊ Note ရေးနေတဲ့ … Read more
ကိုယ့်ကိုထားခဲ့ပြီး ထွက်သွားသူတွေကြောင့်ရလိုက်တဲ့ အဖိုးတန်သင်ခန်းစာ(၇)မျိုး
လူတွေ ကိုယ့်ဘဝထဲကို ဝင်လာကြပြီး အချိန်တန်တော့လည်း ကိုယ့်ဘေးကနေပြန်ထွက်သွားကြတာ သဘာဝပါ။ ကိုယ့်ဘဝထဲဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေထဲမှာ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့သူတွေလည်းပါလာသလို၊ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့သူတွေလည်း ပါလာတာပါပဲ။ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘေးက သူတို့ ကိုယ့်ဘေးကထွက်သွားတဲ့အခါ ဒီလိုသင်ခန်းစာတွေကို ပေးသွားတတ်ကြပါတယ်။ ( ၁ ) လူတိုင်းကို မယုံတတ်အောင် သင်ပေးတယ် အခုခေတ်မှာ လူတော်တော်များများက ရှေ့တစ်မျိုး၊ ကွယ်ရာတစ်မျိုး ဟန်ဆောင်ကောင်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ သူတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရတဲ့အခါ လူတိုင်းကို မယုံသင့်ကြောင်း သင်ခန်းစာ ရသွားပါတယ်။ ( ၂ ) သူတို့ကြောင့် ကိုယ် ပြောင်းလဲသွားတယ် လူတစ်ယောက် ဘဝထဲကို ဝင်လာတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်းတွေက ကိုယ့်အပေါ်သက်ရောက်မှုလေးတွေ ရှိလာပါတယ် ။ အဲ့ဒီအခါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှာလည်း ပြောင်းလဲမှုလေးတွေ … Read more
သင့်ချစ်သူက မကြာခင်သင့်ကို ထားသွားတော့မယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့အချက် (၁၁) ချက်
သင့်ချစ်သူက မကြာခင်သင့်ကို ထားသွားတော့မယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့အချက် (၁၁) ချက် သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုထားသွားတော့မယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာတွေကို သင်သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလက္ခာတွေ သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ဖက်က ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ သင့်ချစ်သူက မကြာခင်သင့်ကို ထားသွားတော့မယ်ဆိုတာ ပြနေတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ ဒီမှာပါ။ (၁) သင့်စိတ်ထဲမှာ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သလို၊ တစ်ခုခု မှားနေသလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ သူ့အပြုအမူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင့်စိတ်ထဲမှာ ကသိကအောက် အမြဲဖြစ်နေရပါလိမ့်မယ်။ (၂) သင်ဟာသူ့အတွက် အရေးမပါတဲ့ သူတစ်ယောက်လို ခံစားနေရမှာပါ။ သင့်ထက်စာရင် တခြားအရာတွေက သူ့အတွက် ပိုအရေးကြီးနေပါလိမ့်မယ်။ (၃) (လင်မယားဆိုရင်) သင်တို့နှစ်ဦးရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးဟာ အင်မတန်မှ ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာ ကောင်းနေပါ လိမ့်မယ်။ (၄) … Read more
မိန်းမခိုးမည့်ညမှာ ဆက်ဖီဆွဲတတ်လွန်းတဲ့ ညီမသိသွားလို့ နွားဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတဲ့အဖြစ်
“ကိုရီး ကုပ်ချောင်းချောင်းနဲ့ ဘာလုပ်နေတာလဲ” “ငင် … ” လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျုပ်ညီမဗျ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ သူ့အခန်းထဲကထွက်လာတယ်… ” နင်ခုထိ မအိပ်သေးဘူးလား ” “အိပ်မက်ထဲမှာ ကိုရီး မိန်းမသွားခိုး မယ်လို့ မက်လို့ လန့်နိုးလာတာ ” ” ငါ့နှယ် အဲဒါမက်တာနဲ့ လန့့်နိုးစရာလား ” ” နိုးတာပေါ့ ကိုရီးနဲ့ညားပြီး ဘယ်ငတိမ ကံဆိုးမလဲပဲ စိတ်ပူနေရတာ ” ” ငိမ့် … ” မောင်နှမ အချင်းချင်းတောင် ကပ်ဖဲ့နေသေးတယ် “ကလေးနေရာ ကလေးနေစမ်းပါဟာ သွားအိပ်တော့ ” “ဒါနဲ့ ကိုရီးက ဘယ်သွားမှာလဲ” “အဟိမ်း ” (ပီတိသံကြီးနဲ့ ) “မိန်းမသွားခိုးမလို့ … ” … Read more
မိန်းကလေးတွေက ရွယ်တူ/အငယ်တွေထက် ကိုကိုမှကိုကိုဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက်
မိန်းကလေးတွေက ရွယ်တူ/အငယ်တွေထက် ကိုကိုမှကိုကိုဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက် အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်နဲ့သက်တူရွယ်တူတွေ ၊ မောင်လေးတွေထက်စာရင် ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ကိုကိုတွေနဲ့ပဲ ချစ်သူဖြစ်ချင်ကြတဲ့မိန်းကလေးတွေ ပိုများလာပါတယ် ။ ကိုကိုတွေကိုတော့ မိန်းကလေးတွေက အချက် (၅)ချက်ကြောင့်ရွေးချယ်လာကြတာပါ ။ ဒီအချက်လေးတွေကတော့ …. ၁. ကိုကိုတွေက လုံခြုံမှုပေးတယ် မိန်းကလေးအများစုက ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို ကိုယ်မှီခိုအားထားလို့ရမယ့်သူမျိုးပဲဖြစ်စေချင်ကြတယ် ။ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်း လုံခြုံမှုပေးတဲ့သူမျိုး ၊ အခက်အခဲတွေကြုံလာရင်လည်း ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးနိုင်တဲ့ အားကိုးရတဲ့သူမျိုးကိုပဲ ရွေးချယ်ချင်ကြတယ် ။ ဒီလိုအချက်တွေကို ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ကိုကိုတွေမှာပဲတွေ့ရတတ်တယ်လေ ။ ၂. အလေးအနက်ထားပြီး လေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ် မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းလွယ်တယ် ။ သူတို့နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်း အလေးအနက်ထားစေချင်ကြတယ် ။ဥပမာ – မွေးနေ့တို့ … Read more
Categories က်မၼာေရး ဗဟုသုတ, အခ်စ္ေရး
သင့်ယူမယ့်မိန်းကလေးကို မလုပ်သင့်တဲ့ အချက်ပေါင်း ၅၀ (ယောက်ျားလေးတိုင်းဖတ်သင့်ပြီး မိန်းကလေးတိုင်းရှယ်သင့်ပါတယ်….)
သင့်ယူမယ့်မိန်းကလေးကို မလုပ်သင့်တဲ့ အချက်ပေါင်း ၅၀ (ယောက်ျားလေးတိုင်းဖတ်သင့်ပြီး မိန်းကလေးတိုင်းရှယ်သင့်ပါတယ်….) ၁။ သင့်ဇနီးသည်ဟာ ပြည့်စုံသူ မဟုတ်လို့ သူ့ ကို ခွင့်လွှတ်ပါ။ ၂။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်အရိုးထဲက အရိုးဖြစ်လို့ သူ့ကို မရိုက်ချိုးပါနဲ့။ ၃။ သင့်ဇနီး ဟာ လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်၊ တန်ဖိုးထားပါ။ ၄။ သင့်ဇနီးဟာ ရှားပါးတဲ့ ကျောက်မျက်အရိုင်းလေး ဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ မနာလို စိတ်လေးတွေကို လမ်းမှန် တည့်ပေးပါ။ ၅။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေပါ၊ သူ့ကို ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံပါ။ ၆။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့ဝမ်းမြောက် စရာပါ၊ သူ့ကိုပြည့်ဝ အားအင်ရှိစေပါ။ ၇။ သင့်ဇနီးဟာ ယုယမှုခံထိုက်သူပါ၊ သူ့အတွက် ကျေနပ်ဝမ်းသာပါ။ ၈။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့အဟာရပါ၊ … Read more
ဘုန်းကံမြင့်သော မိန်းမများ.. အမျိုးသမီးများအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေသောပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ်
ဘုန်းကံမြင့်သော မိန်းမများ.. အမျိုးသမီးများအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေသောပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ် ဘုန်းကံမြင့်သော မိန်းမများ အစွန့်ပစ်ခံ မိန်းမသားတို့၏ ဘုန်းကံဆိုတာ ယောကျ်ား ဖြစ်သူကထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ ချစ်သူကထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ အငယ်အနှောင်းယူသွားလို့ဖြစ်စေ အပြစ်ရှာ ထွက်ခွာလို့ဖြစ်စေစွန့်ပစ်ခဲ့ရင် မိန်းမ တချို့ဘဝ ပျက်မတတ်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ် အမှန်က ပျော်ရမှာပါလက်ခုပ်တီးပြီးကို ကျေနပ် ဝမ်းမြောက်စွာပျော်နေရမှာပါ ကိုယ်ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတုန်း သန်စွမ်းနေတုန်း ရှာဖွေနိုင်တုန်းမှာ သိလိုက်ရတဲ့ အတွက် ကိုယ့် တန်ဖိုး နားမလည်တဲ့လူရဲ့ ဘေးနားမှာနေပြီး အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ဖြတ်သန်းရ ခြင်းထက် နှောင့်ဖွဲ့ခြင်းမဲ့စွာ ဘဝ ကိုလွတ်လပ်စွာ တည်ဆောက်ရခြင်းက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို နားလည်ခဲ့ရင် ဒီမိန်းမဟာ ပျော်သင့်ပါတယ် တခါက ဘုရင်ကြီး တစ်ပါးမှာ သမီး(၃)ယောက် ရှိသတဲ့ ဘုရင်ကြီးက သမီးတော် တို့ ဒီလိုနေနေရတာ ဘာကြောင့်လဲလို့ မေးတဲ့အခါ သမီးအကြီး … Read more
ချစ်သူအပေါ်ယုံမှားသံသယလွန်ကဲနေသည့် လက္ခဏာ(၆)ခု ချစ်သူနှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးမှာ ယုံကြည်မှုက အရေးကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ရေရှည်လက်တွဲခဲ့တဲ့ ချစ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခုမှ ချစ်သူဖြစ်ကာစ စုံတွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ဖို့ အချိန်တွေအများကြီးလိုအပ်ပေမယ့် ပျက်စီးသွားဖို့က စက္ကန့်ပိုင်းပဲ ကြာပါတယ်။ ပြန်လည်ရရှိဖို့ကတော့ ထာဝရအချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ ယုံကြည်မှုဟာ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ ချစ်လမ်းခရီးအတွက် အခြေခံအကျဆုံး စံနှုန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်လောက် ယုံကြည်မှု ပျက်ယွင်းသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ အရင်လိုဘယ်တော့မှ ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အတိတ်က အချိန်တစ်ခုမှာ လှည်းစားခံခဲ့ရဖူးသူ၊ သစ္စာဖောက်ခံခဲ့ရဖူးသူတွေအတွက် ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ အစွဲတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒဏ်ရာရနှလုံးသားက နောက်ထပ်မနာကျဉ်ရဖို့ အရမ်းကို ဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအချက်ကြောင့် လက်ရှိချစ်သူနဲ့ကြားမှာ ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ယုံကြည်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲရာကနေ သံသယတွေဖြစ်လာပြီး မိသားစုပြိုကွဲတာ၊ … Read more
သူ့အပေါ် ကိုယ်ကကောင်းရဲ့သားနဲ့ သူကကိုယ့်အပေါ် နည်းနည်းလေးမှကောင်းမလာဘူးဆိုရင်
သူ့အပေါ် ကိုယ်ကကောင်းရဲ့သားနဲ့ သူကကိုယ့်အပေါ် နည်းနည်းလေးမှကောင်းမလာဘူးဆိုရင် ⚘ ဝဋ်ကြွေးတစ်ခုသာ ဖြစ်လာရင် ⚘ ကိုယ်ကောင်းပေမယ့် သူမကောင်းတာ”ဝဋ်”ကြောင့်ပါ။ သူ့အပေါ် ကိုယ်က တကယ်ကောင်းရဲ့သားနဲ့ သူက ကိုယ့်အပေါ် နည်းနည်းလေးမှ ကောင်းမလာဘူးဆိုရင် ကိုယ့်မှာဝဋ်ကြွေး ရှိနေပြီဆိုတာ သေချာပါတယ် …။ သူ့ကို ကိုယ်က ဘာမှအပြစ်လည်းမပြော ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ အပြစ်တွေ ဘာမှလည်းမရှိဘဲနဲ့ ကိုယ့်ကိုသူက အပြစ်ပဲ အမြဲပြောနေပြီဆိုရင်သေချာတယ် ကိုယ့်မှာ ဝဋ်ကြွေးရှိနေပြီဆိုတာ …၊ ကိုယ့်ကလည်း သူ့ကိုတစ်ခါမှ မမုန်းရပါပဲ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိဘဲ သူ့ဆီမှာ … ကိုယ်အမုန်းခံနေရပြီဆိုရင် သေချာတယ်၊ ကိုယ့်မှာ အမှန်တကယ် ဝဋ်ကြွေးရှိနေပြီဆိုတာ …၊ ဝဋ်ကြွေးရှိရင် ကိုယ်မလုပ်ပေမယ့် ကိုယ်လုပ်တယ်လို့ အထင်ခံရတတ်တယ်။ ကိုယ်မပြောပေမယ့် ကိုယ်ပြောတယ်လို့ အထင်ခံရ တတ်ပါတယ် …။ … Read more